JMR BlueStor SHARE serivisy tranonkala serivisy ho an'ny Collaborative HD amin'ny 4K Workflow fampiasana tahirinan'ny tahirin-tsakafo - NAB Show News amin'ny Broadcast Beat, fampielezam-peo ofisialin'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Content Creation » JMR BlueStor SHARE serivisy serivisy serasera ho an'ny HD mpiara-miasa amin'ny 4K Workflow Application Storage
JMR BlueStor SHARE serivisy serivisy serasera ho an'ny HD mpiara-miasa amin'ny 4K Workflow Application Storage
Gordon Moore, tao amin'ny 1965, dia naminavina fa ny isan'ny transistoren amin'ny IC na chip dia roa ambinifolo isaky ny roa taona, na mety hivoatra amin'ny fitomboana ara-drariny ny taham-pahaizana IC farafahakeliny isaky ny roa taona. Toy izany ihany koa ao amin'ny 1950, IBM dia naneho ny fiara voalohany fiara mafy indrindra izay nitovy ny habetsaky ny efitranon'ny ambioka roa tamin'ny 50 "x24" takelaka mba hanomezana ny 3.75MB ny tahirin-drakitra; miaraka amin'ny version 1956 izay miditra ao amin'ny rafitry RAMAC 305 mitazona ny data 5MB amin'ny $ 10k amin'ny MB ($ 10 per MB). Raha ampitahaina, ny saran'ny 8TB androany dia mitentina manodidina $ 0.038 amin'ny GB ($ 3.8 x 10-8 ho an'ny MB) ary mankany 100TB ao anaty 3.5 amin'ny endrika 2025, araka ny ASTC, mitombo ao amin'ny 30% CAGR. Jereo ny tabilao etsy ambany.
Raha jerena ny fivoaran'ny teknolojia fitehirizana nandritra ny taonjato lasa teo, dia misy tombontsoa azo avy amin'ny fampiroboroboana ny fahasarotan'ny rafitra sy ny fandaniana amin'ny rafitra miaraka amin'ny fandrosoana amin'ny rafi-pandaminana mpamokatra rindrambaiko tahiry dia ny fialana amin'ny mpivarotra tompon-tany, monolithique ary lafo vidy. Ny vahaolana amin'ny vanim-potoana hafa dia nosoloina fitaovam-pandrafetana vita amin'ny fitaovana ampiasaina miaraka amin'ny fampitomboana ny fahaiza-manao, ny fahombiazana ary ny teknolojia homogenny ao anatin'ny tontolon'ny fifaninanana monopolistic. Mba hanavahana ny tenany, dia maro ny mpamokatra tahirin-tsakafo madinika no manampy betsaka amin'ny rafitra misy azy ireo, anisan'izany ny safidin'ny SAS / SATA HDDs, SSDs sy ny fiaramanidina hybrid, ny ASIC fampiroboroboana ambaratonga fototra, ary ny orinasa IIC manokana mba hanatsarana ny fahombiazany sy ny fampitomboana azy; Fanamboaran-tsarimihetsika tsara kokoa sy fanatanjahantena ho an'ny fanodinana hafanana sy fihenam-bava; dual RAID, fitaovam-piarovana mahery vaika ary fanaraha-maso maimaim-poana sy fanaraha-maso amin'ny fanatsarana ny fahamendrehana sy ny MTBF, ary ny fandrindrana ny rafitra fampiasana rindrambaiko ao an-trano / OEM mba hanatsarana ny asany. Ny vokatr'izany dia rafitra fitehirizana izay manome ny fahombiazan'ny orinasa, ny fahamendrehana ary ny fahafaha-miasa amin'ny ampahany amin'ny vidin'ny mpivarotra ambony.
Iray amin'ireo orinasa toy izany izay manolotra rafitra toy izany ho an'i Californie JMR Electronics, Inc. ary ny vidin'ny Dual RAID sarany BlueStorTM SHARE serivisy tranonkala serivisy powered by software of euroNAS OS.
Mikendry ny pro-av-pro-av, fampitaovana / cable /zanabolana, media streaming sy famokarana famokarana / famoahana izay mila ny fampiharana Ethernet na Fibera mifototra amin'ny Fiber, mifototra amin'ny haingam-pandeha (fitahirizana miara-miasa) izay mitaky ny fampitaovana avo lenta, ny BlueStor SHARE serasera dia tsara indrindra ho an'ny fandefasana rakitra, maileran'ny serivisy / tranonkalan'ny serasera / streaming media, Digital A / V (Audio / Video) fitehirizana ny workflow, CL cluster ary manamboatra tahirin-tsarimihetsika. Vola avo dimy heny noho ny vidin'ny orinasan'ny orinasam-pandraharahana hafa, azo omena amin'ny 160TB ny haavon'ny angona ao anaty trano 3U ary afaka manamboatra mihoatra ny 1 PB miaraka amin'ny singa tokana. Ny fahazoan-dàlana rindrambaiko omena amin'ny voalohany dia manome fahafaha-manao fitahirizana tsy misy fetrany tsy mila fanavaozana ny fahazoan-dàlana.
"Ny mpanome tolotra aterineto fahatelo dia ny valinteny omen'ny administrateur IT na ireo mpikirakira A / V izay maniry ny fampisehoana mitovy, ny fahamendrehana ary ny fampiasana mora foana amin'ny marika lehibe, saingy tsy misy ny sarany lafo", hoy i Josef Rabinovitz, filohan'ny CEJM. "Ny saram-pifandraisana lehibe kokoa dia avo dimy heny amin'ny laoniny ary tsy mifanentana amin'ny haben'ny fanohanan'ny antotan-taratasim-pandrafetana na ny fanamafisana ny fananganana sy ny fandidiana. Ny mpifaninana kely kokoa dia miady mafy mba hifanaraka amin'ny vidin'ny vidiny ary tsy afaka mifanaraka amin'ny fiorenan'ny rafitra, ny fahamendrehana ary ny fahombiazan'ny rafitra, ary koa ny fanohanan'ny mpanjifantsika eo aloha / aorian'ny varotra. Amin'ny fampifangaroana ny SAS RAID sy ny fandefasam-peo fonosana ho an'ny singa tokana, ny fitaovana fanatanjahantsika farany dia manome tahiry tsotra sy azo itokisana ary avo lenta ho an'ireo tambajotram-pifandraisana, ka mahatonga ireo mpanjifantsika tsy ho voafetra amin'ny fahafahany manitatra ny fampiharana any amin'ny rahona, ny tontolo iainana virtoaly sy vondrona. "
Araka ny voalazan'i Rabinovitz, ny serivisy fitehirizana BlueStor SHARE dia manana endrika manana endrika miavaka miavaka izay mampiasa tariby roa fotsiny ao amin'ny làlana ho an'ny angon-drakitra, ny fampihenana ny fameperan'ny rivotra sy ny tsy fahombiazan'ny toetr'andro. Ny rafitra 3U ny rafitra SAS / SATA dia afaka mametraka enina 3.5 "na 2.5" SAS, SATA, na Solid State Drives (SSD) manomboka amin'ny 1,800 MB / s miaraka amin'ny SATA-III sy 3,000 MB / s mampiasa SSDs ary hatramin'ny 160TB fahaiza-manao, ary mampiasa rindran-damina mipetaka amin'ny seha-pamokarana - amin'ny vidiny mora sy ambany, vibration-damping fiara fitaterana fiara ho an'ny fahamendrehana ambony sy ny fandalovan'ny rivotra. Ny vokatra dia ny ambany fiarandalamby ambany kokoa, ny fahombiazan'ny fiasa avo lenta ary ny fahamendrehana tafahoatra.
Ny serivisy dia manolotra karazana orinasa maromaro, anisan'izany ny SAS / SATA enina 6Gb / sATA, efatra (N + 1 natsangana) natokana ho an'ny mpankafy haingam-pandaminana avo lenta, avo roa heny ny 620W (N + 1) fitaovam-pitenenana mivelatra, 24-port 6GB anankiroa ho an'ny mpandrindra SAS, roa (optional) PCle3.0 SAS Hardware controller RAID, hatramin'ny sehatra 1Gb / s NIC, na dual / quad 10GbE interface interfaces, quad-memory architecture, PCIe expansion slots, ary ny rindrankajim-pandehanana avo lenta amin'ny 3.5 GHz quad-core Intel CPU i7 na CPU roa 8-core Xeon, ary an Intel™ Z97 Express Chipset.
Ankoatra izany, ny serivisy fitehirizana BlueStor SHARE dia ny SES 2.0 mifanaraka ary manome fepetram-panafana / tsy fahombiazan'ny fiara fitaterana maimaim-poana, ary koa ny fikendren'ny mpampiasa interface sy ny fampiasana herinaratra ho an'ny herinaratra ary ny fanamafisam-peo amin'ny alam-pahazavana sy feo, on-off "ary" reset ".
Ny fampifandraisana ny SAS RAID sy ny fandefasam-pandrafetana fandefasana any amin'ny sampana tokana, ny mpizara fitehirizana BlueStor SHARE dia mameno ny filàna eo amin'ny rafitra fiasan'ny orinasa faran'izay haingam-pandeha izay mandany fotoana sy ambany kokoa, izay tsy afaka manolotra fahombiazana sy fahamendrehana toy izany. Ny servisy fitoeran-tsakafo BlueStor SHARE dia azo ampiasaina amin'ny famolavolana paikady efatra: (1) Business 64-bit; (2) Premium Ultra; (3) HA Cluster 64-bit sy (4) Fiber Channel Cluster. Ny fototra fototra 64-bit dia manolotra ny fanohanana RAID 1,5. Ny fametrahana ny Cluster Premium Ultra sy HA (High Availability), miaraka amin'ny fanohanana maimaim-poana, dia manome ny fanohanana rehetra an'ny JMR, ny rindrambaikon'ny RAID, ny 10 Gb / s, miaraka amin'ny fametahana ny rohy 802.3ad (LACP), ny fanodinana enta-mavesatra ary ny fametrahana ny failover. Ny vokatra HA Cluster (izay mitaky ny fampiasana servisy roa) dia ny tontolon'ny sehatra mitaky fitiliana, ny fiarovana sy ny data ary ny 100%. Ny Fiber Channel Cluster dia manome ny avo indrindra, ny fahamendrehana ary ny filaminana ho an'ny fananan'ny orinasa iray. Ankoatra izany, ny mpisera dia afaka manana fahazoan-dàlana mitokana amin'ny fividianana, fa tsy toy ny 'pay-as-you-go' fahazoan-dàlana avy amin'ny fifaninanana.
Ny tambajotran'ny serivisy BlueStor SHARE mpitsidika BlueStor SHARINE euroNAS dia misy karazany maromaro, izay mahasarika ny mpahay teknika IT sy ny Professional A / V, anisan'izany ny AFP, NFS, SMB / CIFS ary FTP; tetikasa iSCSI natsangana miaraka amin'ny fanohanana ny VMware ESX, Microsoft Hyper-V, Citrix XEN; sy ny tariby Fiber Channel miaraka amin'ny fanohanan'ny VMware ESX, Microsoft Hyper-V, Citrix XEN; famokarana asynchrone izay mamerina manangona rakitra amin'ny servisy hafa; snapshot replication izay mamerina haingana ny data mivantana ary azo atokisana; ary teboka fohy momba ny fotoana izay ahafahana mandefa ny antontan-taratasy mankany amin'ny fanjakana aloha. Amin'ny ankapobeny, ny rindrambaiko dia ahitana:
EurnAS Features of Storage Software
Ireo mpamokatra tahiry legioma dia matetika mampiasa fitaovana fiasa sy rafitra fiasa izay tsy maintsy atao amin'ny fitaovana ampiasaina ihany. Amin'ny euroNAS, ireo serivisy serivisy dia afaka mamolavola vahaolana maivana ho an'ny tahirin-tsakafo saingy amin'ny ampahany amin'ny vidiny.
Fikojakojana ny tahiry
EuroNAS dia mavesatra ary manohana ny ankamaroan'ny servisy eny an-tsena kanefa tsy mila fitaovana metaly tsy misy fitaovana. Azo ampiasaina toy ny vidin'ny Virtual Storage Appliance ao anatin'ny tontolo virtoaly izay ahafahan'ny mpampiasa mampiasa ny tahirin-tsakany efa misy mba hananganana zavatra bebe kokoa.
Ny euroNAS dia manohana ny mpanjifan'antoka rehetra miaraka amin'ireo protocoles teratany. Miasa miaraka amin'i Microsoft Windows (XP, 7, 8, 10, 2003 / 2008 / 2012, Hyper-V), VMware ESX / ESXi, Apple MAC OS X incl. XSAN, StorNext, Citrix XenServer 5.x / 6.x, Linux.
Azo ampiasaina ho mpikambana ao amin'ny Active Directory Domain ny mpampiasa, ny mpampiasa sy ny tenimiafina dia ho antonona miaraka amin'ny sehatra. Ny Administrateur System dia afaka mora kokoa hitantana ny mpampiasa azy sy ny fanamarinana azy.
Fanohanana SMB / CIFS
Ny vokatra euroNAS dia manohana ny fampisehoana amin'ny alalan'ny SMB (Server Message Block version 1, 2 ary 3) / CIFS (Common Internet File System) protocols an'ny Windows clients.
AFP Fanampiana incl. Spotlight
Ny vokatra euroNAS dia manohana ny fampisehoana amin'ny alalan'ny AFP (Apple Filing Protocol) ho an'ny mpanjifa Apple. Fanampin'izany, ny EurNAS Premium ihany koa dia manohana ny Spotlight, fampisehoana avo lenta, izay ahafahana mikaroka votoaty haingana. Ny endriky ny votoaty dia atao ao amin'ny server, izay manatsara ny fahaiza-manao ary mampihena ny entan'ny MAC Clients.
Ny vokatra euroNAS dia azo ampiasaina amin'ny fidirana amin'ny angona avy amin'ny NFS (Network File System Protocol) ho an'ny mpanjifa Linux / Unix
Ny iSCSI dia protocol protocola amin'ny IP mifototra, izay mamela ny famoronana virtoaly virtoaly (iSCSI targets) amin'ny server izay azo ampiasaina amin'ny virtualization, fitehirizana fitehirizana, sns. Izany dia tsy mitaky ny fametrahana kabile sy ny tambajotra mifandraika amin'ny Fiber Channel lasibatra. Ny vokatra euroNAS dia manohana ny iSCSI, VAAI (vStorage API ho an'ny Array Integration) ho fampiasana ny VMWare sy ny CHAP (Protocol protocol authentication protocol) ho an'ny fiarovana tsara kokoa.
Fiber Channel (FC) dia teknolojia fitehirizana haingam-pandraharahana. Miaraka amin'ny euroNAS, ny mpampiasa dia afaka manangana fitaovam-pandevenana FC izay hanome ny orinasa I / O sy haingana. Manohana haingana amin'ny 16 Gb / s izy io. Miaraka amin'ny SAN Cluster, dia afaka manintona ny angon-draketran'ny tranokala mampiasa ny protocol FC Enterprise.
Azo ampiasaina amin'ny Cache Tiering ny euroNAS Premium sy HA Cluster. Manatsara ny fahombiazan'ny mpizara fitahirizana amin'ny alàlan'ny fampiasana angona matetika ampiasaina ho an'ny fitaovana haingana kokoa, toy ny SSD. Ity servisy fitsangatsanganana hybrid ity dia hanome fe-potoana avo lenta sy fahaiza-manao bebe kokoa amin'ny fotoana iray ihany. Izy io dia hamakafaka avy hatrany ny famindrana angona angon-drakitra ary mihetsika ireo blocs izay matetika ampiasaina amin'ny fiara haingana kokoa (SSD). Arakaraky ny habetsaky ny serivisy ampiasain'ny mpampiasa dia hahomby kokoa izany.
Ny famatsiana madinika dia singa euroNAS Premium ho an'ny famoronana volom-boky virtoaly miaraka amin'ny toerana mifangaro kokoa noho ny volavolan-dalàna (mifototra amin'ny ampy fotsiny sy fototra), izay misy azy ireo. Ny tombontsoa avy amin'izany dia ny fampiasana ny habaka malalaka sy ny modely kokoa azo ampiasaina, izay ahafahana manitatra ny loharanom-bola rehefa ilaina izany.
Server Mirror amin'ny alàlan'ny Ethernet
euroNAS HA Cluster dia manome ny fahazoana avo lenta amin'ny fotoana iray, famokarana angon-drakitra tsy tapaka ary ny famakiana synchronisation eo amin'ny servisy roa mirindra. Samy manana tahirin-tsoratra mitovy amin'izany ny servisy roa, ka raha tsy mahomby ny iray amin'izy ireo, dia mbola afaka miditra amin'ny angona ny mpanjifany. Azonao atao ihany koa ny mamaritra hoe iza avy ny loharanom-pitaovana tokony ampiasaina amin'ny serivera, izay ahafahana mampiasa ny tambajotra kokoa sy ny fampiasana ambony kokoa amin'ny fotoana iray. Ankoatra izany, ny cluster HA dia manohana tolotra maromaro isan-karazany, toy ny SMB / CIFS / AFP, fanamarinana Active Directory (ho an'ny CIFS sy AFP), NFS ary iSCSI.
Server Mirror amin'ny alalan'ny Fiber Channel
Ny euroNAS SAN Cluster dia mifototra amin'ny teknolojian'ny fantsona fananganana ho an'ny famoronana haitao avo lenta, miaraka amin'ny fampiasana tsara kokoa ny fampiasana ny vokatra tsara ho an'ny tambajotra fitehirizana sy ny workflow digital A / V. Ny SAN Cluster dia mampiasa ny teknolojia euroNAS SMART SAN MIRROR (eSSM), izay midika ho ny replication server amin'ny alàlan'ny alàlan'ny serivisy ho an'ny redundancy.
Ny rakitra dia ahafahan'ny mpampiasa manao kopia tokana na maromaro momba ny satan'ny zana-share / iSCSI / FC amin'ny fotoana iray manokana. Ny rakitra dia ahitana angona fanoratana sy rakitra izay azo averina amin'ny toeran'ny fizarana raha ilaina, raha ilaina, raha vao vita ilay snapshot.
Ny Server Synchronization dia fitaovana avo lenta, izay afaka mandefa ny angona ao amin'ny tambajotra ao an-toerana na lavitra lavitra be azo antoka sy haingana. Mandritra ny famandrihana ny rakitra, rehefa alefanao ny rakitra lehibe, dia novana ny bytes kely ao anatin'io rakitra io, izay mampitombo ny fahombiazany ary mitahiry ny bandwidth. Ny singa Replication Snapshot dia ahafahanao mandika "votoaty mora vidy" - manatsara ny tsy fitovizan'ny data rehefa maka ny data mivantana. Ny asa fanoratana dia afaka atao isan'andro na ora.
Io endri-javatra io dia ampiasaina hanamboarana ny servisy NAS hafa ho an'ny mpizara euroNAS.
Ny vokatra euroNAS dia manohana RAIDs amin'ny fitaovana samihafa amin'ny mpamorona samihafa avy amin'ny orinasa isan-karazany mba hahazoana tsaratsara kokoa ny RAID. Ny serverna euroNAS dia manolotra fitaovana enti-manamboatra fitaovana RAID tafiditra ao anatin'ny interface sy ny fanampiana mailaka fanohanana. Tafiditra ao koa ny Agent Management Storage Manager amin'ny fitantanana mora kokoa.
Support RAID software
Vidim-pamokarana mahomby mahomby miaraka amin'ny fanohanan'ny drafitra RAID rehetra ahitana ny RAID 0, 1, 10, 5, 6. Manohana ihany koa ny fanitarana ny haitao amin'ny Internet, Hotspare Drive ary fampahafantarana amin'ny mailaka raha misy ny tsy fahombiazan'ny disk.
APC UPS Fanohanana
Ny euroNAS Server dia hanakatona ny serivera amin'ny baoritra ambany. Ny fampitam-baovao tsy miankina amin'ny alàlan'ny mailaka dia alefa raha sendra tsy mety. Network sy USB APC APPS fitaovana ihany koa no manohana.
Azo ampiasaina amin'ny fifandraisana amin'ny tambazotra ny tambazotra ao amin'ny tambazotra na ny fampitomboana avoakany.
EuroNAS dia mandefa hafatra mailaka raha sendra diso / herinaratra, tatitra momba ny synchronisation, UPS na fampandrenesana cluster.
Ahoana ny fampiasana ny SHARE
Nisy tranonkala roa nalefa, La Grange Post ary Cucumber & Company eo amin'ny andaniny roa amin'ny US mba hahitana ny antony nividianany ny BlueStor SHARE an'ny JMR sy ny fomba nampiasany ny rafitra. Southern California based La Grange Post dia nisafidy ny servisy fitahirizana ny orinasa ho toeran'ny tobin-tsolika izy ireo, ankoatra ny fampidinana ny JBOD ho an'ny fahaiza-manao 200TB ho an'ny fitomboan'ny fitomboana amin'ny hoavy.
La Grange Post, izay nanokatra ny varavarany tao amin'ny 2008, dia manome orinasa sy mpamokatra votoaty an-tserasera miaraka amin'ny serivisy samihafa manomboka amin'ny resadresaka niomerika sy ny famoahana, ny famoahana horonan-tsary / feo ary ny fanitsiana loko, ny famerenana amin'ny alàlan'ny horonantsary / horonan-tsary, . Ny tranokala sy ny mpiasan'ny mpiasan'ny mpanjifa, miaraka amin'ny traikefa amin'ny fampitana, ny AVAT sy ny programa fampiasa amin'ny tranonkala, dia manasongadina ny baikon'ny 4K manerana ny onjam-peo sy ny onjam-peo, ny fakan-tsary manontolo sy ny hazavana, ny fampivoaran-tsary, ny mpamorona hira ary ny fanjakana -Nahoana ny fanamafisam-peo.
Ny BlueStor SHAR an'ny JMR amin'ny 10GbE fiberena fifandraisana I / O, ampiasaina amin'ny euroNAS OS, dia miasa ho toy ny fiara madinika sy tranokala ho an'ny milina fanodinana La Grange, izay mampiasa Mac sy mazoto sehatra rindrambaiko.
Araka ny filazan'ny tompon-trano Ayal Nitzan, "Nandany fotoana be dia be izahay hitady ny fananana amin'ny alàlan'ny fiara fitaterana marobe ary tsy afaka nahita ny zava-drehetra any amin'ny toerana iray na ny varavarankely GUI mialoha ny fampidirana ny rafitry ny tahiry JMR SHARE NAS. Ny fepetra takian'ny rafitra misy antsika dia ahitana rafitra lavitr'andriana ahafahana manatanteraka ny fepetra vakiana / soratany hatramin'ny 4K workflows amin'ny bangoingina maromaro, manana fahamendrehana be dia be, fialam-boly tena tsara, fanamafisana ny mpanjifa tsara ary amin'ny vidiny mety. "
Ny La Grange dia nanao fiantrana manan-danja talohan'ny nifidianana ny JMR. Nampian'i Nitzan, "Ankoatra ny haavon'ny fahatanterahana sy ny fahamendrehana dia tianay ny rafitra iray izay afaka manatontosa fangatahana tahirin-tsarimihetsika goavambe ary manana fahazoan-drakitra rindrambaiko izay tsy mitaky anay amin'ny fahafaha-mihetsika fanampiny. Nijery ny LaCie, OWC, Synology, HGST sy ExaGrid alohan'ny hanapahana hevitra amin'ny JMR sy ny rafitra BlueStor SHARE. Ny rafitra JMR dia mandroso, vato matanjaka ary azo itokisana; Ireo mpiasa mpanohana azy dia tena mahay, ary mifantoka amin'ny mpanjifa; ary ny rafitra dia hita fa tsotra-amin'ny fametrahana-ary-fampiasana. Ambany ambany - fandresena ho an'ny mpanjifantsika noho ny fanatsarana ny fiasan'ny workflow sy ny ROI lehibe ho antsika. "
Toy izany koa i Beckley, Virginia Cucumber & Company dia mampiasa ny orinasa BlueStor SHARE Network Server Storage Network miaraka amin'ny fahaizan'ny 160TB ho toy ny tahirin-tahiry fototra ho an'ny Mac mifototra amin'ny tetikasa Final Cut Pro sy After Effects.
Ny Cucumber & Company, izay nanokatra ny varavarany tamin'ny 2003, dia manome orinasa sy mpamokatra karazan'asa maro samihafa izay ahitana ny famokarana horonan-tsary, tranonkala, Multimedia draharaha sy ny varotra ary ny tontolom-panorenana manerana ny Tendrombohitra sy ny firenena. Ny orinasa dia miditra ekipa mpanjifa manana traikefa ahitana mpanonta horonantsary, mpandraharaha mpaka sary, mpanamory fiaramanidina sy mpitantana mivantana mivantana izay ahafahany mamokatra vokatra an-tariby amin'ny vokatra an-tserasera, anisan'izany ny dokam-barotra fiaramanidina, video fampiofanana ho an'ny orinasa, horonantsary fampiroboroboana ny tranokala, ary ny fandrakofana mivantana, Ny fakan-tsary dia mitifitra amin'ny fahafahana miaina hetsika mivantana ho an'ireo olona an'arivony an-tserasera.
Ny BlueStor SHAR amin'ny JMR amin'ny 10GbE fiberena fifandraisana I / O, ampiasaina amin'ny euroNAS OS, dia miasa toy ny fiara lehibe sy ny trano fonenana ho an'ny famokarana Cucumber & Company sy ny orinasa famokarana vokatra. Ny tompon'ilay tranom-panjakana Dwane Muncy dia manazava ireo fanamby ara-logistika alohan'ny nisafidianana ny SHARE, "Nandany fotoana be dia be izahay nitady ny fananam-bola tamin'ny fiaramanidina maromaro na tsy nahitam-bokatra, ary tsy afaka nahita ny zava-drehetra tany amin'ny toerana iray izahay talohan'ny nananganana ny JMR NAS amin'ny tambajotrantsika. Ny fahatanterahantsika sy ny fepetra takiantsika dia ahitana rafitra manana tosika izay ahafahana manatanteraka ny fepetra vakiana / soratany eo amin'ny sehatr'asa 4K ao amin'ny XNUMXK amin'ny sehatra fanontana maro, mora ampiasaina, manana fahamendrehana be dia be, manana mpanjifa tsara fanohanana ary amin'ny vidiny mety. "
Ny fikambanan'ny Cucumber & Company dia nandinika mpivarotra maro talohan'ny nifidianana ny JMR sy ny rafitra BlueStor SHARE. Nampian'i Muncy, "SHARE dia nanamarina ireo boaty rehetra takiana amin'ny fananganana kalitao, fahamendrehana, fahombiazana ary fahaiza-manao, asa, vidiny ary aorian'ny fanohanana varotra. Ny tombotsoa fanampiny dia ny hoe ny rafitra dia afaka manatontosa fangatahana tahirin-tsarimihetsika goavam-be ary manana fahazoan-dàlana rindrambaiko izay tsy mitaky fitambolan-tahiry fanampiny. Ity no vokatra tsara indrindra avy amin'ny orinasa iray manerantany. Isaky ny nananako fanontaniana aho, ny JMR sy ny mpanohana azy izay tena mahay, dia tonga teo mba hanampy ahy hamaha ilay olana. "
Senior Editor at Fampandrenesana mivantana sy AV Beat Magazine
Curtis Chan dia Filoha sy CEO / Mpanorina ary Mpifanaraka mivantana amin'ny orinasa avo roa heny Brand Marketing and Public Relations, CHAN & ASSOCIATES sy COGNITIVE IMPACT, ny mpanjifany dia avy amin'ny Global Fortune 500 mba hientana amin'ny fanombohana ara-bola.
Ny sampan-draharahan'ny sampan-tsampiny, nandritra ny efa-polo taonjato, dia nanampy ny garnera tany am-boalohany sy ireo orinasa fampiroboroboana marobe mampiavaka ny marika, ka nahatonga ny famerenana na ny IPO, miaraka amin'ny fanombanana ny $ 2.0 Billion.
Mr. Chan dia mpandraharaha, serivisy, mpanoratra ary anjely mpampiasa. Nanao laharam-pahamehana lehibe izy tamin'ny nanampiana ny mpisava lalana ary nampiditra teknolojia niomerika niomerika niomerika nomerika ho an'ny firaketana an-tsoratra, fampielezampeo, orinasan-tsarimihetsika sy ny famokarana. Nanao laharam-pahamehana ihany koa izy tamin'ny fanampiana ny fampivoarana sy ny famokarana teknolojia fitehirizana ny angona. Ny lozam-pampandrosoana goavana dia miresaka am-polony am-polo taonany amin'ny fampitomboana ny fahefana mpanatanteraka eo amin'ny sehatra, ny fampandrosoana ny orinasa, ny engineering ary ny fivarotana / ny varotra amin'ny teknolojia fampahalalam-baovao, ny media & fialamboly, ny fitehirizana sy ny tambajotra, ary ny orinasa hafa mifandraika amin'ny teknolojia.
Izy dia mpanolotsaina mavitrika sy mpanolotsaina ambony amin'ny orinasa maro efa miorina sy manomboka, mpanadihady momba ny varotra / teknolojia, ary manana traikefa telo taona amin'ny fampiroboroboana ny marika, toro-hevitra momba ny fitantanana, fivarotana orinasa, famoronana dokam-barotra ary fifandraisana amin'ny besinimaro.
Ny mari-pahaizana diplaoma ao amin'ny University Polytechnic State University (Cal Poly), San Luis Obispo; Mankalaza ny faha-13 faha-taonany Andriamatoa Chan amin'ny maha filoha lefitra ho an'ny Fullerton College Foundation ary mpandray ny mari-pahaizana 2017 an'ny orinasa natokana ho an'ny asa fanompoana; 18 faha-taona amin'ny maha-Mpandraharaha-trano sy mpampianatra ho an'ny Institut Fandraharahana kely any California State University Fullerton sy mpamono olona. Ankoatr'izay, mpikambana amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo an'ny DECA (Delta Epsilon Chi sy klioba fampianarana any Etazonia); mpanolotsaina iray avy amin'ny College of Engineering's Waste Research Institute sy ny Centre For Innovation and Entrepreneurship, Cal Poly, San Luis Obispo ary mpikambana ao amin'ny Filohan'ny Green and Gold Society. Mirary fatratra ny fikarakarana hopitaly, izy no Filohan'ny Birao ho an'ny Fikambanana Fanasitranana; ary mpandahateny tsy tapaka matetika amin'ny lahatenin'ny ambaratonga MBA sy Doctorat maro manerana ny firenena. Izy no nanolotra sy namoaka tamin'ny taratasy 30 manerantany, mpanoratra miaraka amin'ny boky, Mpikambana ao amin'ny Birao Mpanatanteraka ho an'ny Fikambanana Society of Motion Picture and Television Engineers, ny tonian-dahatsoratra ho an'ny Broadcast Beat ary Gazety AV Beat, ny tonian-dahatsoratra taloha ho an'ny famerenana ny teknolojia informatika, ary dia tonian-tsarimihetsika mpanohana matetika amin'ny famoahana boky ara-barotra amerikana sy iraisam-pirenena mandritra ny 30 taona maro.
Jereo ny tolotra Kognitive Impact ao amin'ny www.cognitiveimpact.com. Afaka tonga any Curtis [mailaka voaaro]; Office: (714) 447-4993 na [mailaka voaaro]
OMNIMAGO Mifidy ny MediaPulse Xytech hamoahana ny filàna tetik'asa hitantanana ny tetik'asa - Novambra 12, 2019
La Grange Post Misafidy ny JMR SHARE Networking Storage Servera Central Storage Hub amin'ny Facility - Jolay 17, 2019
Ny Cucumber & Company dia mividy ny JMR SHARE serivisy serivisy serverto centralize ny fanodinana - Jolay 17, 2019
10GbE 1GbE 4K Mpandrindra 4K / UHD mazoto fampitana injeniera fampitana Engineering Fampahalalam-baovao mivantana-sosialy Fampitana-SocialMedia Fampitana-SocialMeida Drone fanovana HDR HEVC fampidirana JMR lahatsoratra famokarana famokarana fanafihana Server TV Technology TVU Networks Video injeniera Video Production	2019-07-15
Previous: Ny Sasani Studios dia manangana ny Media Foundation manaraka ho an'ny famolavolana amin'ny alàlan'ny EditShare Workflow Solutions
Next: 2019 -2020 Film sy Video Specialist (miaraka amin'ny andraikitra tsy dia manan-danja)